Nepali Rajneeti | कोरोनाले वावुलाई लगे तर उनले आमालाई यो खवर सुनाउन सकेनन् ….
कोरोनाले वावुलाई लगे तर उनले आमालाई यो खवर सुनाउन सकेनन् ….
बैसाख २१, २०७८ मंगलबार ४८४ पटक हेरिएको
अवस्था सामान्य थियो भने यतिबेला उनी सेतो वस्त्रमा हुने थिए । परिवारसँगै बाबुको मृत्यु संस्कारमा जुटिरहेका हुन्थे । तर उनी टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा डेढ साताको बसेर शनिबार साँझमात्रै घर फर्किएका छन् ।
अघिल्लो शुक्रबार उनले बुबा शंकरराज सिंह सुवाललाई कोरोना संक्रमणकै कारण टेकु अस्पतालमा गुमाए । डिकेनकी आमा, श्रीमती र छोरालाई समेत संक्रमण भयो । ‘अस्पताल ल्याएको चार/पाँच दिनपछि बुबा बित्नुभएको खबर पाए पनि चुपचाप मन दह्रो बनाएर बसें,’ उनले भने, ‘मेरो छोरा र आमालाई अझै बुबा बित्नुभएको खबर थाहा छैन ।’
बुबाको मृत्युको खबर सुन्नुबाहेक अरू केही गर्न नसकेकोमा उनले दुखेसो पोखे । ‘हामी सबै हस्पिटलमै थियौं । हस्पिटल, वडा अध्यक्ष र एक जना दिदीले बुबाको दाहसंस्कार गर्नुभयो भन्ने सुनें । बुबाको नाममा हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भावुक हुँदै सुनाए । उनका अनुसार सुवाल केही वर्षदेखि मुटुका बिरामी थिए । मुटुमा पेस मेकर राखिएको उनलाई कोरोनाको लक्षण देखिएको थियो ।
संक्रमण भएको थाहा पाएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याएको डिकेनले बताए । ‘फोक्सोमा संक्रमण बढिसकेकाले बुबालाई तत्काल आईसीयूमा राख्नुपर्ने भयो । बल्ल टेकुमा आईसीयू वार्ड पाएपछि बुबासहित हामी पनि भर्ना भएका थियौं,’ उनले भने । पाँच दशकभन्दा बढी कला सिर्जनामा बिताएका सुवाल पछिल्लो समय पनि उत्तिकै सक्रिय थिए ।
ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनादेखि नेपालमा आधुनिक चित्रकला विकासमा योगदान पुर्‍याएका उनको मृत्युमा छोराले अन्तिम संस्कारसमेत गर्न पाएका छैनन् । सुवाल ‘मेम्बर अफ आर्टिस्ट सर्कल’ का सदस्य तथा आधुनिक कलाकार समाज (सोमा) का अध्यक्षसमेत थिए ।
डिकेनकी आमा र श्रीमतीलाई सुवालको निधनपछि तुरुन्तै ललितपुरस्थित स्टार अस्पतालमा सारिएको थियो । शय्या अभावका कारण डिकेनलाई भने पुनः टेकुमै ल्याइयो । अस्पतालमा दैनिक देखिने भयावह अवस्थालाई उनले नजिकैबाट नियालिरहेका छन् । घरमा अब अभिभावकत्व बहन गर्नुपर्ने भएकाले मनलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।
निको भएर उनकी आमा र श्रीमती शुक्रबार घर फर्किएका छन् । छोरा होम आइसोलेसनमा छन् । भर्खर तंग्रिएकी ७० वर्षीया आमाले आफ्ना श्रीमान्को मृत्युको खबर कसरी सहलिन् भन्ने चिन्ताले उनलाई अझै सताइरहेको छ । उनले सुनाए, ‘शरीर र अन्य रोगका कारण आमाको स्वास्थ्य अवस्था ठीक छैन । त्यही भएर हामीले अझैसम्म केही भनेका छैनौं । अब बिस्तारै सबै मिलाउनुपर्छ भन्ने सोचमा छु ।’
मृत्युसँग लडिरहेको सिंगो परिवार र आँखै अगाडि बुबाको जीवनको अन्तिम समयलाई बेहोरेका डिकेन कोरोनाले लाचार बनाएको सुनाउँछन् । यसलाई कमजोर नठान्न सबैप्रति उनको आग्रह छ । लक्षण देखिनेबित्तिकै अस्पताल पुर्‍याउन पाएको भए बुबालाई बचाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने उनलाई थकथकी लागिरहेको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा कोरोना भएको थाहा पाएपछि घरमा नै निको होला कि भनेर बस्नु हाम्रो ठूलो गल्ती हो,’ उनले भने, ‘अहिले मेरो परिवारले भोगेर थाहा भयो । भोलि अर्को परिवारले पनि यस्तै भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।’ कान्तिपुर